Yintoni ukuhlambalaza ubuhlungu kunye nokuyintoni na?
Siyatsho ukuba uhlaziyilo oluthile lungakanani.
Ngelishwa, iyeza zanamhlanje azikafumananga indlela yokukhusela isifo esifanelekileyo njenge-prostatitis. Yonke indoda yesine emva kweminyaka engama-40 igugu le-prostate gland. Ukunyamekela nokukhupha isi sifo akukho nje kuphela ukungabi namandla, kodwa kunye nokuphuhliswa kwesisu esinesifo sengqondo - i-prostate adenoma. Kodwa musa ukuthukuthela, kuba kukho iindlela eziphambili zokunyanga le ntshoyo, enye yeyobuhlungu obuyingozi. Kwaye ukuba ugqirha wachaza le ndlela ethile yokulwa nesifo, umntu makangayithathi nenyango, kuba akukho nto ihlazo malunga nalo. Iyintoni inkqubo yokwenziwa komsebenzi kwaye yintoni umphumo onika ngayo, funda ngezantsi.
Iyintoni inzuzo yokwehliswa kwesisu?
Olu hlobo lonyango lusetyenziswa kuzo zonke iintlobo ze-prostatitis, ngaphandle kokusasazeka, njengoko isigulane sinobuhlungu obungenasiphelo. Kuzo zonke ezinye iimeko, impembelelo yale nkqubo ithetha emva kweseshoni yeshumi rhoqo. Into leyo kukuba ngenxa yokubetha kwesigxina, ukujikeleza kwegazi kuphucula, oko kukuthi, kukhawuleza ukuhlaziywa kwakhona kwezicubu zesisu esonakele. Ukuphelisa ukusabela okuvuthayo, ukucoca umzimba kufuneka kwenziwe ngokusebenzisa i-cream ye-zinc, ekufuneka ixutywe kwi-rectum yesigulane. Ngaphambi kokunyangwa kwindoda egulayo, umntu kufuneka aqiniseke ukuba akukho nto ihlazo kule ndlela kwaye kungcono kunokuvuma ukungqinelana kwesi sifo.
Kuchaneka njani ukuba wenze i-whirlpool massage?
Ngaphambi kokuqala inkqubo, kucetyiswa ukuba isigulane senze ukuhlanjululwa. Kungcono ukwenza i-eneme ngesiseko somshuthu ofudumeleyo osusa ngokugqithiseleyo ukucaphukisa nokuvutha kwezicubu ezichaphazelekayo. Emva koko, i-masseur kufuneka igqoke iiglavu zonyango kwaye isebenzise i-petroleum jelly kwi-index finger. Ulungelelaniso kufuneka lusetyenziswe kumnyango wokuvula umvu - oku kuya kunciphisa intlungu. Ukungena ngomnwe kuyimfuneko uze ufumane itywina encinci, eliza kuba neengxenye ezimbini. Ukuvuvukala, ngokuqhelekileyo, yinqanaba elungileyo elo limele lihlaselwe. Iimfudu akufanele zibukhali, kuya kuba ngcono ukuba zizinto ezilula. Ngokukhawuleza ukuba i-prostate gland ishushu, susa ngomnwe umnwe uze uyigcobe nge-cream ye-zinc. Siphinda kwakhona inkqubo.
Kubaluleke kakhulu ukuba ungayiva nje kuphela intsimbi, kodwa kwakhona ukulawula amandla okucindezela. Unxinzelelo oluninzi lunokubangela ukuba ubuhlungu obukhulu bubuhlungu, kodwa neengxaki. Ngoko ke, phambi kokuba uxoxisane kakuhle nogqirha, okanye unikele ukuphunyezwa kwalo myalelo kuye ngokwakhe.
Ukuxilwa kwe-urological kuhle kuyenzi kabini ngosuku: kusasa emva kokuvuka nangaphambi kokulala. Ngethuba leeyure apho umzimba wethu ulungele ukungenelela okunjalo.
Zama ukukholisa isiguli ukuba amabali malunga ne-massage ye-uro-massage yintlonelo engakwazi ukukhusela. Ngokuqinisekileyo, umntu uya kuqonda ukuba kungcono ukunyamezela iiseshini zalo mgaqo kunokubandezeleka kwimiphumo emva kokuphila. Musa ukulibala ukuba impilo yethu isezandleni zethu kuphela!
Iimpawu zomntu oyedwa
Umyeni ofanelekileyo, akunjalo?
Indoda yezodiac isibonakaliso se-scorpion
Ukutya, iindlela eziphambili kunye ezikhawulezayo zokulahlekelwa ubunzima
I-risotto enomhlaza kunye nee cubes zemifuno kunye nembewu yefelk
I-cookie yaseMexican ne-icing
Amabhasi kunye nama-raspberries kunye ne-lemon glaze
I-Veal kwi-sauce ekhemayo
Oko kufuneka uyenze ukwenza kube lula ukuzala
Nciphisa umntu ngevumba
Ukugcoba ngesaladi ye-eggplant
Intliziyo ye Curd kunye namajikijolo
I-pumpkin casserole ngeeshizi
Indlela yokufunda ukuphika